अन्तरवार्ता / बिचार मुख्य | mulkhabar.com
काठमाडौं , २७ असार – नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्ने कुरा दुरगामी महत्वको एउटा ऐतिहासिक पहकदमी हो । यसले धेरै चिज फेरबदल ल्याइदिएको छ । किनभने पहिलोचोटी नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी लोकप्रिय मतद्धारा झण्डै दुइतिहाई बहुमत प्राप्त भएको छ । ०१५ सालमा एकचोटी कांग्रेसलाई प्राप्त भएको थियो । ०७ सालमा त कांग्रेस मुख्य थियो […]
Posted in अन्तरवार्ता / बिचार मुख्य,मुख्य समाचार,राजनीति मुख्य Read More »
कुरामा हाेइन काममा विश्वास गराैं – रेणु दाहाल
भरतपुर महानगरमा विकासको गति कसरी अगाडि बढेको छ ? दिगो र आत्मनिर्भरमा केन्द्रित सन्तुलित र समुचित ढंगले विकासको मोडेल अगाडि बढाउन खोजेका छाैैं। अहिलेसम्म भएको काम सन्तोषजनक र सकारात्मक छ। हामीले गर्न सकिने, केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र पहल गरेर हुने विकासको काममा सफल भएको सुखद अनुभूति छ। जुन खालको जमर्को […]
Posted in अन्तरवार्ता / बिचार मुख्य,मुख्य समाचार Read More »
काठमाडौं , २० जेठ – किन पार्टी परिवर्तन गर्नुभयो ? म जे सोचेर र जे बुझेर कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेँ त्योअनुसार पार्टी चलेन । कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै जाँदा र अहिलेसम्मको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्दा ठूलठूला सङ्घर्षहरू भए । तर जनता र राष्ट्रलाई फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा भएको पाएँ । त्यसकारण […]
Posted in अन्तरवार्ता / बिचार मुख्य,एक्सक्लुसिभ समाचार,मुख्य समाचार Read More »
-देव गुरुङ- १. सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा प्रस्तुत सरकारको २ सय १८ बुँदे नीति–कार्यक्रम मुलभूत रूपमा सही रहेको छ । यसले ४ वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्वि दर हासिल गर्ने, १५ औं योजनाको सुरुवात गर्ने र तीव्र आर्थिक विकास गरी सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरिसक्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ यो नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत भएको देखिन्छ । […]
कार्ल मार्क्सकै योगदानका कारण वैज्ञानिक समाजवादको विकास भयो, श्रमजीवीका लागि नयाँ युगको सुत्रपात भयो। विश्वमा ठूलठूला क्रान्ति भए। हामी कार्ल मार्क्स जन्मिएको २०० वर्ष मनाउँदैछौं। मानव जातिको इतिहासमा कार्ल मार्क्सको निकै ठूलो योगदान रहेको छ। मानव जातिले कार्लमार्क्सलाई १००० वर्षयताकै महान व्यक्ति, महान् दार्शनिक ठान्छ, जसका विचारले संसारलाई नै प्रभावित गर्यो। आजसम्म त्यसको वैज्ञानिक खण्डन […]
काठमाडौं , १४ बैसाख – एउटा अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा प्रयोग गरिएका कुरालाई महिमा बनाएर त्यसैमा रमाउने र आत्मरति गर्ने, कम्युनिष्ट आन्दोलन र राजनीतिलाई नयाँ गति दिने आँट विलकुलै नगर्ने एउटा प्रवृति संसारभर अनि नेपालमा पनि छ । हामी त्यसका विरुद्ध लगातार संघर्ष गर्दै आएका छौं । र हामीले त्यसले पारेको अप्ठ्यारो अवस्थालाई पनि भोग्दै आएका छौं […]
–अार सी अधिकारी– चुनावी गठबन्धनको आधारमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको ११ महिना पूरा भएको छ । अर्थात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को उमेर अब एक बर्षको हुँदैछ । दुई भिन्दाभिन्दै धाराको नेतृत्व गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उदाएका दुई पार्टीबीचको एकता ठूलो पार्टी बनाउने अंकगणितको प्राविधिक विषयमात्रै थिएन । […]
Posted in अन्तरवार्ता / बिचार मुख्य Read More »
-दीनानाथ शर्मा- १९ औँ शताब्दीको उत्तराद्र्ध र २०औँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धतिर विश्वमा उपनिवेशवादविरुद्ध युद्धको कालो बादल मडारिन थाल्यो । आफ्नो सत्ता अक्षुण्ण राख्न कसरी सम्भव होला भन्नेबारे ब्रिटिस संसद् र बौद्धिक क्षेत्रमा व्यापक बहस चल्यो । शिक्षाविद् लर्ड मेकालेलाई दक्षिण एसियाका देशहरूको अध्ययनमा पठाइयो । उनले लामो अध्ययन अनुसन्धानपछि भाषा, संस्कृति, शिक्षा र धर्मको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष […]
Posted in अन्तरवार्ता / बिचार मुख्य,एक्सक्लुसिभ समाचार Read More »
-नारायण पौडेल- भासिल पेट्रोभिच होलोबोरोड्को उच्चमाध्यामिक तहका इतिहास शिक्षक हुन् । हासोठट्टा गर्न रुचाउने भासिलको इतिहास पढाउने शैली मिठासपूर्ण छ । इतिहासजस्तो पट्ट्यारलाग्दो बिषय भएपनि उनको कक्षा रोचक हुन्छ । उनी विकृतिका विरुद्ध आगो ओकल्छन् । युवावयका विद्यार्थीले उनलाई औधी रुचाउँछन् । एकदिन इतिहासका बारेमा अन्तरक्रियात्मक अध्यापन गराइरहेका हुन्छन् भासिल । एकाएक विद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीलाई […]
तपाई भुमी ब्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालेको लगभग ६ महिना पुग्यो, यो बीचमा के के काम भए ? मैले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखी भुमि व्यवस्था, सहकारी, गरीबी निवारणका क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी, संस्थागत सुधार र सुशासन कार्यक्रमका क्षेत्रमा निरन्तर प्रयत्न गरिरहेकी छु । एकैचोटी र भन्नेबित्तीकै सबै काम हुने त हैन, तर यो […]